I-China i-Led Portable Work Lights, i-Led Pole Light Fixtures, i-Led Work Light Light
Inkcazo:Izibane zemiSebenzi eziLungisiweyo,Ukulungiswa kokuKhanya kwePolisi ,Led Work Light,I-Led Portable Work Lamp,,
Home > Imveliso > Izibane zoMsebenzi > Iimpawu zoLwazi eziPhathwayo ze-LED
Iintlobo zeMveliso ze- Iimpawu zoLwazi eziPhathwayo ze-LED , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Izibane zemiSebenzi eziLungisiweyo , Ukulungiswa kokuKhanya kwePolisi ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-130lm / w 5000K 80W ikhokelela i-bulb yesikolweni yokusebenza  Qhagamshelana Ngoku
80W Iimpawu zokusebenza ze-LED eziphathekayo  Qhagamshelana Ngoku
I-120W iLed Work Temporary Light 15600Lumen  Qhagamshelana Ngoku
I-10400LM 5000K 80W UkuLungiswa koMsebenzi wokuKhanya  Qhagamshelana Ngoku
I-80W I-Temporary LED Work Work Light 10400Lm  Qhagamshelana Ngoku
I-High Bay iLed Worktime Light 150W  Qhagamshelana Ngoku
Ukufakwa kweHook Ukulungiswa komsebenzi wokukhanyisa umsebenzi we-150W  Qhagamshelana Ngoku
Ulungelelwaniso lwezithuba zesikhashana 150W  Qhagamshelana Ngoku
I-150W I-LED yoKhanya kwexesha eliPhezulu loMsebenzi oLindiweyo wokwakha  Qhagamshelana Ngoku
150W I-Portable LED yexesha eliPhezulu loPhuculo lokuKhanya  Qhagamshelana Ngoku
I-100W High Bay LED Ixesha elifutshane lokuSebenza koMbane wokuKhanya  Qhagamshelana Ngoku
I-100W I-Temporary LED Work Work Light 13000Lm 5000K  Qhagamshelana Ngoku
I-100W ikhokelela ekukhanyeni komsebenzi wesikhashana  Qhagamshelana Ngoku
150W Izibane zemiSebenzi yangaphandle yeeGarage zangaphandle ii-240 volt  Qhagamshelana Ngoku
120W Izibane zangaphandle zoKwakha zokwakha 110v  Qhagamshelana Ngoku
Iimitha ezingama-80 zeLed Portable Work Lights 120v  Qhagamshelana Ngoku
I-130lm / w 5000K 80W ikhokelela i-bulb yesikolweni yokusebenza <Isakhiwo esilungeleleneyo sokuKwakha > : Lezi zibane zesevisi ezikhokelwayo ezi-80W zihamba ngokukhawuleza kwaye kulula ukuthutha kumsebenzi ohlukeneyo. I-Snap-lock Π ukukhangela...
80W Iimpawu zokusebenza ze-LED eziphathekayo <Isakhiwo esilungeleleneyo sokuKwakha > : Lezi zibane zesevisi ezikhokelwayo ezi-80W zihamba ngokukhawuleza kwaye kulula ukuthutha kumsebenzi ohlukeneyo. I-Snap-lock Π ukukhangela phezulu ukuze...
I-120W iLed Work Temporary Light 15600Lumen <Ukwakhiwa koKwakha okuKhelelekileyo > : 120W Izinto ezihamba phambili zokukhanya zisebenza ngokukhawuleza kwaye kulula ukuthutha kwimisebenzi eyahlukileyo. I-Snap-lock Π ukukhangela phezulu ukuze...
I-10400LM 5000K 80W UkuLungiswa koMsebenzi wokuKhanya <Ukwakhiwa koKwakha okuKhelelekileyo > : Lo msebenzi okhokelwa ngu- 80W okhokelayo wukukhawuleza kwaye kulula ukuthutha umsebenzi ohlukeneyo. I-Snap-lock Π ukukhangela phezulu ukuze...
I-80W I-Temporary LED Work Work Light 10400Lm <Ukwakhiwa koKwakha okuKhelelekileyo > : Lo msebenzi okhokelela ukukhanya 80W ukhawuleza kwaye kulula ukuthutha kumsebenzi ohlukeneyo uhlala. I-Snap-lock Π ukukhangela phezulu ukuze uxhomeke lula....
I-High Bay iLed Worktime Light 150W <Ukwakhiwa koKwakha okuKhelelekileyo > : Lo msebenzi okhokelela ukukhanya 150W ukhawuleza kwaye kulula ukuthutha umsebenzi ohlukeneyo. I-Snap-lock Π ukukhangela phezulu ukuze uxhomeke lula. I-premium...
Ukufakwa kweHook Ukulungiswa komsebenzi wokukhanyisa umsebenzi we-150W Ukukhanya kokusebenza kwendawo ephezulu ekhokelekileyo yindawo ehamba phambili yindawo efanelekileyo yokufakelwa kwezibane ze-incandescent ezingama-300, ukugcina ufike kuma-80%...
Ulungelelwaniso lwezithuba zesikhashana 150W Ukukhanya kokusebenza kwendawo ephezulu ekhokelekileyo yindawo ehamba phambili yindawo efanelekileyo yokufakelwa kwezibane ze-incandescent ezingama-300, ukugcina ufike kuma-80% kwi-bill yakho. 150W...
I-150W I-LED yoKhanya kwexesha eliPhezulu loMsebenzi oLindiweyo wokwakha Lo msebenzi ophezulu okhokelwa yibhayi ukutshintshwa okugqithisiweyo kwezibane ze-incandescent ezingama-300, ukugcina ufike kuma-80% kwi-bill yakho yombane. Iimpawu Zethu...
150W I-Portable LED Portal Fixtures Lo msebenzi ophezulu okhokelwa yibhayi ukutshintshwa okugqithisiweyo kwezibane ze-incandescent ezingama-300, ukugcina ufike kuma-80% kwi-bill yakho yombane. Iimpawu Zethu zoMsebenzi eziPhathwe ngexeshana...
I-100W High Bay LED Ixesha elifutshane lokuSebenza koMbane wokuKhanya Lo msebenzi ophezulu okhokelwa yibhayi ukutshintshwa okugqithisiweyo kwezibane ze-incandescent ezingama-300, ukugcina ufike kuma-80% kwi-bill yakho yombane. Iimpawu Zethu...
I-100W I-Temporary LED Work Work Light 13000Lm 5000K IziLights Work Lights eziyi -100W zitshintshwe ngokugqibeleleyo izibane ze-incandescent ezingama-300, zilondoloze ukuya ku-80% kwi-bill yakho yombane. Iimpawu Zethu zoMsebenzi eziPhathwe...
Le 100W Led String Umsebenzi Lights i indawo ogqibeleleyo izibane ezingqengezelayo 300W, ukonga ukuya kwi-80% kwityala lakho lombane lenyanga. Izibane zethu zemiSebenzi yesikhashana zibulela ngokuqhawuleza kwiqonga leplagi kunye nentambo yokuxhuma...
Ixabiso lento: USD 62 - 66 / Piece/Pieces
I-Bbier 150W iLight Works Work lights i-130lm / w, i- 19500 iLumens kunye ne-5000k Daylight Color, indawo ye-ETL ye-ETL. Le 150W Led Garage Umsebenzi Lights 6 00W wamfihla Ukutshintshwa, 120-277V, zobude, ukothuka, kwaye nefuthe ukumelana. 240 Volt...
Iimpawu zethu zokusebenza ze-110v zenzelwe ukudibanisa ubuchule bokuqhaqha kweengcali zeendawo eziphakamileyo zendawo kunye nokulungelelaniswa komsebenzi ophathekayo wokukhanya . Oku Izibane zemiSebenzi yangaphandle ziyi 130lm / Watt, ukuphuma...
Ixabiso lento: USD 48 - 50 / Piece/Pieces
I-New Portable Work Lights Led ilungele izakhiwo zokwakha, izitolo zokulungisa, ii-worksites kunye neegaraji. W yethu IiShedyuli Lights aphathekayo ilula kwaye ihlinzeka ngokuhamba ngokulula, okwenza kube nzima ukuthutha kumasayithi omsebenzi kwaye...
KwiChina Iimpawu zoLwazi eziPhathwayo ze-LED Abaxhasi
Iimpawu zokusebenza ezibonakalayo ze-LED zivelisa ukukhanya okugqithiseleyo kunezinye ii-LED zokusebenzela indawo ephephile yomsebenzi. I-China iLed Work Work Lights Ukufakela lula, vala nje ukuxhuma kwintambo kwaye ulungele ukuya. 80 watt, 100 watt, 120 watt kunye ne 150 watt ziyafumaneka kwiLed Portable Work Lam p . Yenza ukukhanya okugqwesileyo kunye nokugqithise kakhulu kwisicelo sakho ngokusebenza kwe 120 Lm / Watt kunye ne-120 ° i-angle yebhande ebonisa ukukhanya okufanayo. Ukukhanyisa iindawo ezingummangaliso zendawo yakho yomsebenzi kunye ne-bbier ezithengisayo ze-LED zokuThuthukiswa kweeLwimi .
Izibane zemiSebenzi eziLungisiweyo Ukulungiswa kokuKhanya kwePolisi Led Work Light I-Led Portable Work Lamp Izibane zeJenji eziLungisiweyo zeLanga